Dugsiyada Caafimaadka ee Maryland 2022
Iskuulada caafimaadka ee Maryland waa qaar ka mid ah kuwa ugu fiican dalka in kastoo aysan badidooda ka jirin Maryland laakiin waxbarashadooda heer sare ah waxay u taagan tahay heer qaran iyo heer caalami.
Maryland waa Gobol Mid-Atlantic ka ah dalka Mareykanka oo lagu qeexo marin biyoodka badan iyo xeebaheeda ku yaal Chesapeake Bay iyo Badweynta Atlantik. Waa iskudhaf bay'ada magaalooyinka iyo miyiga taasoo kadhigaysa barashada mid xiiso leh una bandhigta ardayda caafimaadka bukaanjiifka asal ahaan kaladuwan iyo bandhigyo badan oo caafimaad.
Halkan Maryland waxaa ku yaal qaar ka mid ah iskuulada caafimaadka ee ugufiican Mareykanka halkanna boostadan, waxaan ku siiyay faahfaahin kasta oo lagama maarmaan ah oo ku saabsan iyaga.
Waa imisa qiimaha dugsiga caafimaadka ee Maryland?
Dugsiyada Caafimaadka ee ugu Fiican Maryland
1. Dugsiga Caafimaadka ee Jaamacadda Johns Hopkins
2. Jaamacadda Maryland School of Medicine
3. Jaamacadda Adeegyada labiska ah ee cilmiga caafimaadka
Dugsiyada Kaaliyaha Caafimaadka ee Maryland
2. Kuliyada Cecil
5. Machadka Fortis
7. Kuliyada Bulshada ee Degmada Baltimore
8. Xirfadaha Gobolka oo dhan
Dugsiyada Caafimaadka Osteopathic ee Maryland
Liiska Dugsiyada Caafimaadka ee Maryland
Kharashka iskuulka caafimaadka ee Maryland waa $ 37,810 sanadkii ardayda gudaha iyo $ 66,905 ardayda caalamiga ah.
Kuwa soo socdaa waa liistada la soo ururiyey iyo faahfaahinta iskuulada caafimaadka ee ugu wanaagsan Maryland:
Jaamacadda Johns Hopkins School of Medicine
Jaamacadda Maryland School of Medicine
Jaamacadda Adeegyada Gaarka ah ee Sayniska Caafimaadka
Haddii iskuul kasta oo caafimaad uusan wicin gambaleelka, Johns Hopkins ayaa runtii hubaal doona oo waa Maryland in xaruntan sharafta leh ay ku taal.
Iskuulka Caafimaadka ee Jaamacadda Johns Hopkins waxaa la aasaasay 1893 waxaana loo yaqaanaa guulo badan oo caafimaad qaran iyo caalami ahaanba. Halkaan ayey ahayd markii mataanaha Siamese markii ugu horreysay si guul leh lagu kala saaray, labaduba waa badbaadeen ilaa maanta, tani waxay ka mid tahay horumarkiisa caafimaad ee badan.
Hadafka Johns Hopkins Medicine waa in kor loo qaado caafimaadka bulshada iyo adduunka iyadoo la dejinayo heerka ugu wanaagsan ee waxbarashada caafimaadka, cilmi baarista, iyo daryeelka caafimaad. Iyada oo loo marayo barnaamijyadeeda kala duwan, heer caalami ah ee caafimaadka, Johns Hopkins Medicine wuxuu baray ardayda caafimaadka, saynisyahannada, xirfadlayaasha daryeelka caafimaadka, iyo dadweynaha.
Iskuulku wuxuu kaloo sii wadaa inuu sameeyo cilmi-baaris cilmiga bayoolajiga ah iyo inuu bixiyo daawo bukaan-ku-saleysan si looga hortago, loo ogaado, loona daweeyo jirrada aadanaha. Waxaa jira illaa 120 baro barnaamijka MD oo in ka badan 6,000 codsadeyaal ah ay u tartamaan sanadkiiba. Qeybaha tacliinta waxaa ka mid ah Suuxdinta & Daryeelka Khatarta ah, Farshaxanka sida loo adeegsaday Daawada, Cilmiga Biology, Haweenka iyo Dhalmada, Daawada, Biology Molecular & Genetics, Qalliinka Lafaha, iyo inbadan.
Celceliska la aqbalay GPA ee loogu talagalay Iskuulka Caafimaadka ee Johns Hopkins waa 3.94 oo leh celcelis ahaan dhibcaha MCAT ee 521. Kharashka waxbarashada ee ardayda gudaha iyo kuwa caalamiga ahba waa isku mid $ 55,037 sanadkiiba.
Dugsiga Caafimaadka ee Johns Hopkins waa mid aad u tartan badan oo haddii aad halkan timaaddo, u isticmaal fursadda si buuxda.
Waxay ku taallay Baltimore, Maryland oo la aasaasay 1807, Jaamacadda Maryland, Iskuulka Caafimaadka wuxuu ahaa iskuulkii ugu horreeyay ee caafimaadka bulshada ee Mareykanka. Hay'addu waa mid ka mid ah kuwa ugu dhakhsaha badan ee soo koraya, ee ugu sarreeya shirkadaha cilmi-baarista bayoolajiga adduunka oo adduunka oo dhanna looga aqoonsan yahay tayadeeda waxbarasho caafimaad.
Waxay leedahay 43 waaxood oo tacliimeed, xarumo, machadyo, iyo barnaamijyo loogu talagalay inay ku bixiyaan heer sare cilmiga bayoolajiga, cilmi baarista aasaasiga ah iyo caafimaadka, daryeelka bukaanka tayada leh iyo adeegga si kor loogu qaado caafimaadka muwaadiniinta Maryland iyo kuwa ka baxsan Sannadle, in ka badan 4,800 arday ayaa codsada dugsiga caafimaadka oo u tartamaya 150-ka boos ee laga heli karo barnaamijka MD.
Ma ahan wax war ah in Jaamacadda Maryland, Iskuulka Caafimaadka ay ka mid tahay iskuulada caafimaadka ee ugu wanaagsan Maryland iyo waddanka guud ahaan iyo waliba tartan aad u sarreeya, iyagoo codsanaya celcelis ahaan GPA ee 3.83 oo leh celcelis ahaan dhibcaha MCAT ee 514 codsadayaasha. Kharashka waxbarashada ee ardayda gudaha waa $ 40,076 iyo $ 69,100 ardayda caalamiga ah.
Jaamacadda Adeegyada Lebiska ee Sayniska Caafimaadka waxaa la aasaasay 1972 waxayna ka kooban tahay F. Edward Hebert School of Medicine - iskuul caafimaad oo ay ku jiraan barnaamijka waxbarashada qalin-jabinta cilmiga caafimaadka oo dhameystiran - Daniel K. Inuoye Graduate School of Nursing, Postgraduate Dental College , iyo Kuliyada Cilmiga Caafimaadka Isbahaysiga.
Iskuulku wuxuu u heellan yahay inuu u diyaariyo ardayda ka qalin jabisay adeeg gudaha Mareykanka gudaha iyo dibedda qaybaha caafimaadka sida xirfadlayaal caafimaad, kalkaaliyeyaal caafimaad, iyo dhakhaatiir. Taasi waa, dugsigu wuxuu ardayda ku tababbaraa dhinacyada waxbarashada, cilmi-baarista, adeegga, iyo la-tashiga si loogu adeego adeegyada labbisan (Ciidamada Mareykanka, Ciidanka Badda ee Mareykanka, Ciidamada Cirka Mareykanka, iyo Adeegga Caafimaadka Dadweynaha ee Mareykanka). qaranku markaa wuxuu la xiriiraa howlahan daawada militariga, dawada masiibada, iyo u diyaargarowga caafimaad ee militariga.
Ugu dambeyntiina, waa dugsiga keliya ee aan ardayda ka qaadin khidmadda waxbarashada oo taa beddelkeeda mushahar siisa ardayda. Waxaan dhihi karnaa waa iskuulka kaliya ee caafimaad ee bilaashka ah ee Mareykanka iyo shuruudaha tacliimeed runtii way hooseeyaan. Celcelis ahaan MCAT la aqbalay waa 496 oo leh ugu yaraan GPA ee 3.0 mana ahan mid la tartamaya kuwa kale ee liiskan ku jira, sidaas darteed, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad halkan ka dalbato.
Kuwani waa iskuulada caafimaadka ee Maryland, dhagsii xiriiriyeyaasha la bixiyay si aad wax badan uga ogaato nidaamka codsigooda iyo sidoo kale inaad hubiso in dugsigu kuugu fiican yahay adiga.
Haddii ay dhacdo inaadan awoodin inaad gasho mid ka mid ah iskuulada caafimaadka ee Maryland, si fiican, weli rajo ayaa jirta. Waxaad ka geli kartaa kaaliyaha caafimaadka iskuulka ee Maryland waxaadna kasban kartaa khibrad dhanka caafimaadka iyo caafimaadka ah.
Ma jiraan shuruudo gelitaan gaar ah oo lagu galo mid ka mid ah iskuulada caafimaadka ee Maryland, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad haysato dibloomaada dugsiga sare ama GED ama wax u dhigma oo waad dalban kartaa barnaamijka kaaliyaha caafimaadka. Barnaamijyada badanaa waxaa laga helaa xerada dhexdeeda iyo khadka tooska ah si ay waxbarashadu u noqoto mid is bedbedesha.
Waad kasban kartaa shahaado ama shahaado wadaageyn ah kalkaaliye caafimaad waxayna qaadan doonaan 9 bilood inay kudhameeyaan barnaamijka shahaadada iyo 2 sano shahaadada wadajirka ah.
Hoos waxaa ku yaal iskuulada kaaliyaha caafimaadka ee Maryland:
Allegany College ee Maryland
Kulliyadda Beesha Fredrick
Kuliyada Bulshada ee Harford
Kuliyada Bulshada ee Degmada Baltimore
Xirfadaha Gobolka oo dhan
Kulliyadda Bulshada ee Anne Arundel, waxaad u aadi kartaa shahaadada ama barnaamijka kaaliyaha caafimaadka ee kaaliyaha caafimaadka oo qaadanaya 1 iyo 2 sano siday u kala horreeyaan. Haddii aad rabto inaad si dhakhso leh u soo gasho xoogga shaqaalaha markaa waa inaad u tagtaa shahaadada 32-amaah laakiin laakiin haddii aad rabto inaad sii ballaadhiso aqoontaada goobta ka dib u tag shahaadada 60-credit.
Kharashka waxbarashada ee ardayda gudaha ee barnaamijka kaaliyaha caafimaadka ee Anne Arundel Community College waa $ 112 halkii dhibic iyo $ 219 ardayda caalamiga ah.
Kulliyadda Cecil waa mid ka mid ah iskuulada kaaliyaha caafimaadka ee Maryland, shahaadada kaaliyaha caafimaadka ee 900-saacadood halkan waxaa loogu talagalay in lagu tababaro oo lagugu qalabeeyo xirfadaha daaweynta iyo aqoonta si aad u noqotid caawiye caafimaad oo hufan ee ku jira warshadaha daryeelka caafimaadka.
Ku mid noqoshada barnaamijka waa waxqabadka daaweynta ee 160-saacadood ee isbitaalka, khidmadda waxbarashada ee ardayda caalamiga ah waa $ 226 halkii dhibic iyo $ 119 ee ardayda gudaha.
Kulliyadda Allegany ee Maryland waa mid ka mid ah iskuulada caawiye caafimaadka ee Maryland, iskuulkan gaarka ahna wuxuu bixiyaa labo shahaado oo isku xira Mid wuxuu udub dhexaad u yahay dhinaca maamulka kuwa doonaya inay noqdaan karraaniyaal, soo dhaweyn, ama fariistaan ​​miiska hore ee xafiiska caafimaadka.
Midda kale waxay udub dhexaad u tahay xirfad-dejin dhammaystiran, oo bixisa koorsooyin wadaad, kiliinik iyo shaybaar ah si ay kuugu qalabeeyaan xirfadaha wax ku oolka ah ee caawiye caafimaad. Labada barnaamijba waxay u baahan yihiin laba sano si loo dhammaystiro.
Kulliyadda bulshada ee Fredrick, waxaad ikhtiyaar u leedahay inaad fasalladaaga dhigato inta lagu jiro maalinta iyo fiidkii ama aad ku dooratay midka ku saleysan sida aad ugu habboon tahay. Shahaadooyinka iyo barnaamijyada shahaadada jaamacadeed ee kaaliyaha caafimaadka ayaa halkan lagu bixiyaa, iyagoo siinaya aasaas adag howlaha maamulka iyo daaweynta.
Machadka Fortis waa mid ka mid ah iskuulada caawiye caafimaadka ee Maryland oo bixiya diblooma barnaamijka oo isku daraya muxaadarooyin iyo tababar wax ku ool ah. Manhajka ayaa loogu talagalay inuu ku barto howlaha maalinlaha ah ee culimada iyo howlaha caafimaad ee looga baahan yahay inay xafiiska caafimaadka ku sii hayaan si hufan.
Harford Community College waxay bixisaa shahaadada iyo barnaamijka shahaadada jaamacadeed ee kaaliyaha caafimaadka, oo loogu talagalay inay ku tababarto inaad noqoto xirfadle daryeel caafimaad oo badan. Ardayda ka qalin jabisa barnaamijkan dugsigan waxaa lagu yaqaan heerka qanacsanaanta loo shaqeeyaha sare iyo shaqaalaynta.
Halkan waxaad ka heli kartaa xirfado heer sare ah iyo aqoon kalkaaliye caafimaad iyada oo loo marayo shahaadada iyo barnaamijyada shahaadada jaamacadeed oo qaadata 11 illaa 13 bilood shahaadada iyo laba sano si loo dhammaystiro shahaadada wadajirka ah. Waxaa laguu tababari doonaa xirfad ballaaran oo loo dejiyey si aad si wax ku ool ah u maareeyso doorka kaaliyaha caafimaadka ee warshadaha daryeelka caafimaadka.
Hay'adani waxay bixisaa diblooma ku saabsan kaaliyaha caafimaadka, oo loogu talagalay inay ku tababarto oo kugu qalabeyso xirfado shaqo oo daaweyn ah iyo xirfadeed oo ku saabsan qayb kasta oo ka mid ah warshadaha daryeelka caafimaadka. Diblooma-nimada waxay qaadataa bilo si loo dhamaystiro, waxaad dhahdaa 3 ilaa 6 bilood hadaad rabto inaad balaadhiso aqoontaada iyo xirfadaada goobta, waa inaad kadib u baxdaa shahaadada jaamacada.
Marka, kuwani waa iskuulada caawiye caafimaadka ee Maryland, waxbadan ka baro iyaga oo haddii ay kugu habboon yihiin, bilow inaad codsato oo waxaad u baahan kartaa inaad ka dalbato wax ka badan mid ka mid ah dugsiyadan si aad u kordhiso fursadahaaga, in kasta oo aysan tartan ahayn.
Dhammaan iskuulada caafimaadka ee Maryland waa:
Hubi talooyinka hoose si aad aragti dheeraad ah uga hesho mowduucyada la xiriira.
iskuulada caafimaadka ee ugufiican Marylandliiska dhammaan iskuulada caafimaadka ee Marylandiskuulada caawiye caafimaadka ee Marylandiskuulada caafimaadka ee Marylandiskuulada caafimaadka ee osteopathic ee Maryland
Previous Post:21 Koorsooyinka Kulliyadda Bilaashka ah ee Bilaashka ah ee Abaalmarinta
Post Next:12 Koorsooyinka ugu Fiican ee Khadka Tooska ah ee Suuq geynta oo wata Shahaadooyin